PUBG MOBILE LITE အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（685.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် PUBG MOBILE LITE
Pubg Mobile Lite သည် Unreal Engine4ကို အသုံးပြု. Pubg Mobile Gameplay တွင် 10 မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ထုပ်ပိုးသည့် Arena mode နှင့်ကိုက်ညီရန်မူလ Pubg Mobile Gameplay တွင်တည်ဆောက်သည်။ Streamlined Game သည် 600 MB အခမဲ့နေရာ 600 MB အထိချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ရန်အတွက် 1 GB RAM 1 GB RAM ရှိသည်။
2 ကီလိုမီတာကျွန်းသည်အရင်းအမြစ်များကြွယ်ဝသောကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ကျဆင်းသွားပြီး Duke သည်ကျုံ့နေသောစစ်မြေပြင်၌ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲတွင်သင့်အားကူညီရန်လက်နက်များ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှာဖွေပါ။ Land သို့0င်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, တူရကီ, အင်ဒိုနီးရှား, တရုတ်, ရိုးရာတရုတ်, အာရဗီ, အာရဗီ, အာရဗီ, အာရဗီ, BR>2။ မျှမျှတတေးသောဂိမ်းပတ်0န်းကျင်
3 ။ 3
3 ။ Arena
ဂိုဒေါင် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပူးပေါင်း. Local Team Up, အခန်းကတ်များနှင့်မျိုးနွယ်စုများနှင့်မျိုးနွယ်စုများသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကစားခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကစားခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
5 ။ HD ဂရပ်ဖစ်နှင့်အသံ
6 ။ The Teamwork
သည်သူငယ်ချင်းများကိုအတူတကွကစားခြင်းနှင့်အတူတကွကစားရန်မိတ်ဆွေများကိုတီထွင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ချုံခိုတိုက်ခိုက်သောချုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်သင်၏ရန်သူများကိုအံ့အားသင့်။ သင်၏အသင်းဖော်များကိုစစ်တိုက်ရာတွင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်နှင့်သင်၏မျိုးနွယ်စု၏လွှမ်းမိုးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်တိုက်ပွဲဝင်ပါ။
7 ။ တရားဝင်နောက်ဆုံးသတင်းများ
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.pubgmlite.com
Twitter: Twitter https://twitter.com/pubgmobilelite
Pubg game_.... Pubg mobile game _..... Pubg mobile lite game..... sachin pubg game.... pubg lite
CLUTCH MACHINE 🔥 | 1v4 GAMEPLAY |BGMI LITE | PUBG MOBILE LITE
Lou Wan Gaming
U Maung Ngwe
good we love all 😘pubg😘
not bad i like
My 1 game